အရွယ်ရောက်ပြီး ယောင်္ကျားလေးများ ရေတိမ်မနစ်စေဖို့ …! (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ ) - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / အရွယ်ရောက်ပြီး ယောင်္ကျားလေးများ ရေတိမ်မနစ်စေဖို့ …! (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ )
အရွယ်ရောက်ပြီး ယောင်္ကျားလေးများ ရေတိမ်မနစ်စေဖို့ …! (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ )
Apann Pyay 9:48 AM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
မိန်းကလေးများ၏ အယုံသွင်းစကားများကြောင့်သင့်ဘဝ ရေတိမ်မနှစ်ပါစေနှင့် …..
အဲလိုမျိုး စကားတွေကို ယောက်ကျားလေးတွေရှောင်နိုင်ရအောင်လို့ မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
အင်း အဓိကပြောချင်တာကတော့ အခုခေတ်ယောက်ကျားလေးတွေကို ယောက်ကျားသိက္ခာနဲ့လူပျိုဘဝကို တန်ဖိုးထားစေ ချင်လို့ပါ။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေလွမ်း မိုးလာတဲ့နောက်မှာ ယောက်ကျားလေးတွေဟာ သိပ်ပြီးမထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စလို့ထင်လာမှာ ဆိုးလို့ပါ။ ယောက်ကျားလေး ဘဝဆိုတာ ကျောက်ပျဉ် ပေါ်က ကြက်ဥ ဖြစ်နေလို့ ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ပါ။ လူရှေ့သူရှေ့တောင် မရှောင် ယိုသူမရှက်မြင်သူ ကြည်နေတဲ့ အချိန်မှာ သင်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာ ခေါ်ဆောင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသာ တပေတော့လို့သာပြော ချင်ပါတယ်။
အခုစာလေးက အမည်မသိ စာရေးဆရာကြီးတစ်ဦးရဲ့ စာစုလေးကို အတိုချုံပြီးအသိပေးလိုက်တာ ပါ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အရွယ်ရောက်ပြီးယောက်ကျားလေးတိုင်း ဖတ်ရှု့ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။